Duulimaadka Doha ilaa Abidjan oo ay bilawday Qatar Airways
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadka Doha ilaa Abidjan oo ay bilawday Qatar Airways
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Cote d'Ivoire • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Madaxa Shirkadda Qatar Airways, Mudane Akbar Al Baker
Seddex duulimaad oo toddobaadle ah, adeegga u dhexeeya Doha iyo Abidjan ee loo maro Accra waxaa maamuli doona shirkadda casriga ah ee Boeing 787 Dreamliner oo ka kooban 22 kursi oo ah Qaybta Ganacsiga iyo 232 kursi oo ah Qaybta Dhaqaalaha, oo ay weheliso awoodda ilaa 15 tan xamuulka.
Diyaaradda Qatar Airways ayaa hadda saddex toddobaad duulimaad ku timaadda Côte d'Ivoire, iyadoo sii marineysa Accra.
Abidjan waa meesha siddeedaad ee diyaaradda Qatar Airways tagtay tan iyo markii uu billowday masiibo caalami ah.
Rakaabka Qatar Airways ee ka socda Afrika waxay ku raaxeysan karaan gunnooyinka alaabooyinka ee u dhexeeya 46 Kg iyo 64 Kg.
Qatar Airways waxay ku soo dhaweyneysaa Abidjan shabakadeeda caalamiga ah iyada oo duulimaadkeedii ugu horeeyay ee ay ku tagto magaalada ugu weyn ee Côte d'Ivoire ay maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha Felix Houphouet Boigny. Seddex duulimaad oo toddobaadle ah, adeegga u dhexeeya Doha iyo Abidjan ee loo maro Accra waxaa maamuli doona shirkadda casriga ah ee Boeing 787 Dreamliner oo ka kooban 22 kursi oo ah Qaybta Ganacsiga iyo 232 kursi oo ah Qaybta Dhaqaalaha, oo ay weheliso awoodda ilaa 15 tan xamuulka.
Qatar Airways Madaxa Kooxda, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Bilaabida duulimaadyada aada Abidjan, Côte d’Ivoire - oo ah meeshii afaraad ee aan tagno Afrika tan iyo markii uu billowday cudurkan, ka dib markii aan dhowaan ka bilownay Abuja ee Nigeria; Accra ee Gaana; iyo Luanda oo ku taal Angola waa tallaabo muhiim u ah kobaca Afrika. Tani waxay markhaati u tahay sida ay nooga go’an tahay qaaradda Afrika oo aan hadda ka shaqeyno in ka badan 100 duulimaad oo toddobaadle ah oo tagaya 25 meel oo ku kala yaal 18 dal oo loo maro gurigayaga iyo xaruntayaga, Hamad International Airport. ”
“Qatar Airways, inaan u joogno rakaabkeenna, la-hawlgalayaashayada ganacsiga iyo macaamiisha shirkadaha ayaa diiradda noo saarnaa tan iyo bilowgii cudurkan. Waxaan uga mahadcelineynaa dowladda Côte d'Ivoire taageerada ay siiso duulimaadyadan, waxaana rajeyneynaa inaan si dhow ula shaqeyno shuraakadayada halkaan ku nool si aan u kobcino waddadan una taageerno soo kabashada dalxiiska iyo ganacsiga gobolkan. Maaddaama safarradii adduunka ay dib u soo kabanayaan 2021, waxaan rajeyneynaa inaan sii ballaarinno shabakadeena isla markaana aan siino xiriiro badan oo ka imanaya iyo ka imanaya Afrika. ”
Daahfurka Abidjan wuxuu kaloo taageerayaa baahida loo qabo kororka ganacsiga ee u dhexeeya Côte d'Ivoire iyo meelaha loo maro qadka Qatar Airways sida Paris, Beirut iyo meelo badan oo ka tirsan qaaradaha Hindiya. Ilaa 15 tan oo xamuul xamuul ah oo duullimaadkiiba duulimaad ah, Qatar Airways Cargo ayaa door muhiim ah ka ciyaari doonta fududeynta dhoofinta muhiimka ah ee Côte d'Ivoire.
Rakaabka Qatar Airways ee ka socda Côte d'Ivoire waxay hadda ku raaxeysan karaan gunnooyin cusub oo bagaash ah oo u dhexeysa 46 Kg oo loogu talagalay Fasalka Dhaqaalaha oo loo kala qeybiyey laba qaybood iyo 64 Kg oo loo kala qeybiyey laba qaybood oo ah Qaybta Ganacsiga. Hindisahan waxaa loogu talagalay inuu siiyo rakaabka dabacsanaan iyo raaxo badan markay ku safrayaan diyaaradda Qatar Airways.
Jadwalka Duulimaadyada Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha: (Dhammaan waqtiyada deegaanka)
Doha (DOH) ilaa Abidjan (ABJ) QR1423 waxay baxaysaa: 02:30 timaado: 09:10
Abidjan (ABJ) ilaa Doha (DOH) QR1424 ayaa ambabbaxaysa: 17:20 ayaa timid: 06:10 +1
Dalxiisayaashu waxay helaan Phuket Nightlife si dhakhso ah ayey ku dhammaataa 9
Bayaanka Gudoomiyaha Midowga Afrika ...
Xoojinta safarka ku habboon cimilada ee eber